Ilhan Cumar oo Guul Taariikhi ah ka gaartay Doorashadii ka dhacday Mareykanka – Kismaayo24 News Agency
Ilhan Cumar oo Guul Taariikhi ah ka gaartay Doorashadii ka dhacday Mareykanka
by admin 7th November 2018 0117
Ilhan Cumar oo ah Gabar Soomaali Mareykan ah ayaa markii ugu horeesay ku guuleesatay in ay ka mid noqoto Aqalka Hoose ee Congress-ka dalka Maraykanka, kadib guul ay ka gaartay doorashadii dhacday.
Waxa ay noqotay Ilhan Cumar gabadhii ugu horeesay oo Soomaali ah oo kamid noqoneysa Aqalka Hoose ee Congress-ka dalka Maraykanka, waxa ayna guusha Ilhan gaartay farxad u tahay Soomaalida kunool Mareykanka.
Ilhan Cumar oo hada ah hooyo 36 sano jr ah ayaa dalka Mareykanka qaxootinimo ku tagtay iyada oo 12-sano jirta, waxa ayna Ilhan bedeshay nolosha Soomaali badan oo hada hami u yeeshay in ay kamid noqdaan golayaasha dowlada Mareykanka.
Dhinaca kale Hodan Xasan, iyo Maxamuud Nuur ayaa ku guuleystay doorashooyinkii ay ka galeen gobolka Minnesota, waxa ayna labada xubnood ka mid noqon doonaan Aqalka Hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota.
Soomaalida Mareykanka ayaa si weyn usoo dhaweeyay Guusha Soomaalida ka gaareen doorashada dhaxe ee dalka Mareykanka, waxaana guushan Soomaalida u horseedeesay in ay hami badan ka yeeshaan dalka Mareykanka.
Shir goordhaw u furmay Wasiirada Amniga Maamul goboleedyada (Daawo Sawirada)
Odayaasha Dhaqanka Koonfur Galbeed Oo ka Soo Horjeestay Hadal Shalay ka Soo Yeeray Odayaal KGS.
Ciidanka Xoogga dalka oo Gaalkacyo ku gubay Maandooriyaal kala duwan
Ahmed sudani 30th March 2018
Top News: Sanad Kadib Muungaab oo waxqabad la'aan lagu eedeyey.
admin 4th March 2015 28th August 2015
Dhagayso:- Caruur ku dhimatay Miino kula qaraxday Degmadda Balanbal ee Gobalka Galgaduud